के यौन सम्पर्क स्वाभिमानसँग जोडिएको छ ?
पुरुष लिङ्गको स्वास्थ्य
महिला सम्भोगको आनन्द बिन्दुहरु
यौन प्रसारित संक्रमणहरुको विषयमा कसरी भन्ने
इन्टरनेट र सेक्स:
गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क ?
बाहिर तान्ने - के यो गर्भनिरोधकको लागी एक प्रभावकारी विकल्प हो ?
यौनको असन्तुष्टि बराबर मानसिक तनाव
Q प्राकृतिक पारिवारिक नियोजन भनेको के हो ?
प्राकृतिक पारिवार नियोजन (एन.एफ.पी.) भनेको गर्भावस्थाहरुबाट नहुन र बचाउन प्रयोग गरिने निश्चित तरिकाको अवस्था हो । यी विधिहरू एउटा महिलाको रजस्वला चक्रको प्रजननयोग्य रहेको र प्रजनन योग्य नरहेको स्वाभविक रूपमा रहेका चिन्हहरु र लक्षणहरुको लक्षणहरूको अवलोकनमा आधारित हुन्छन् । महिलाको प्रजननयोग्य चक्रको चरणमा यौन सम्पर्क र प्रजनन अङ्गहरुको सम्पर्कबाट गर्भवती हुनबाट बच्न महिना तथा पुरुष जोडीहरुले एन.एफ.पी. प्रयोग गर्दछन् । गर्भावस्थाबाट बच्न कुनै पनि औषधि, साधन, वा सर्जिकल प्रक्रियाहरूको प्रयोग हुँदैन ।
Q मेरो यौन साथीसँग असुरक्षित यौन सम्बन्ध भएको थियो, म उनी गर्भवती भईन् कि भनेर जान्न चाहन्छु ?
असुरक्षित यौन सम्पर्कले सधैं गर्भवती हुने जोखिम हुन्छ । यदि तपाईंको यौन साथीको महिनावारीको अवधि नाघेँको छ भने, उनीलाई औषधि पसलमा उपलब्ध हुने पिसाबबाट गर्भावस्था जाँच गर्ने साधनद्वारा परीक्षण गर्नुहोस् ।
Q के सेक्सको खेलौना प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ ?
यदि तपाईं सेक्सका खेलौनाहरूको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, एच.आई.भी., साइफिलिस, हेपाटाईटिस बी जस्ता एस.टी.डी.को वा अन्य रगतबाट उत्पन्न हुने रोगहरू सर्न नसक्ने उचित सावधानीहरू अपनाउनुहोस् । सेक्सका खेलौनाहरू प्रयोग गर्दाका केही उपायहरू निम्न प्रकारका छन् - सेक्स खेलौनाहरु सफा राख्नुहोस्: प्रत्येक पटकको प्रयोगपछि तिनीहरूलाई राम्रोसँग धुनुहोस्; छिराउने सेक्ससम्बन्धी खेलौनाहरू छोपेर राख्नुहोस् जस्तै भाइब्रेटरहरू, अरू कसैलाई दिनुअगाडि एउटा नयाँ कन्डोमको साथ दिनुहोस्; सेक्स सम्बन्धी खेलौनाहरु यौन साथीहरुहरूसँग साझेदारी नगर्नुहोस् वा प्रत्येक साझेदारको लागि फरक सेक्स खेलौनाको सेट राख्नुहोस् । सुरक्षित सामाग्री छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसले तपाईंलाई एलर्जीको प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउदैँन । चिप्लो पदार्थको प्रयोग एउटा तरीका हो जसले यौन आनन्द र सेक्सको खेलौनाको सुरक्षा बढाइदिन्छ ।
Q स्तनपानको बांझोपना भनेको के हो ? यदि मेरी श्रीमतीले स्तनपान गराइ राखेकी छिन् भने म असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्न सक्छु ?
स्तनपानको कारणले हुने महिनावारी गडबडी वा ल्याक्टेसनल अमेनोरिया अस्थायी बच्चाको जन्मपछिको प्रजनन असक्षमता हो जहाँ महिलाको महिनावारी गडबडी हुन्छ (महिनावारी नहुने) र पूर्ण स्तनपान गर्ने हुन्छ । यदि महिला विशेषगरी स्तनपान गरिरहेकी छिन् भने, यो अवधि १४ महिनासम्म रहन्छ । यो एउटा प्राकृतिक पारिवार नियोजन विधि हो र तपाईं बच्चा जन्मेको पहिलो ६ महिनाको समयमा आफ्नो पत्नीसँग असुरक्षित शारीरिक सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ । यस पछि, गर्भाधारणको जोखिमको वृद्धि हुन्छ र अन्य गर्भनिरोधक उपाय राम्रो हुन्छ ।
Q धूम्रपानले यौन जीवनलाई प्रभाव पार्दछ ?
हो, पार्छ । धुम्रपानले लिङ्ग उत्तेजित नहुने कारण निम्त्याँउन सक्दछ । निकोटीन एउटा भासोकोन्सट्रिक्टर हो जसले रक्त धमनीहरुलाई कस्सिलो बनाउँछ र रगतको प्रवाहलाई प्रतिबन्धित गर्दछ । लिङ्गमा कम रगत आपूर्ति गर्ने भएको हुँदा कम लिङ्ग उत्तेजना हुन्छ ।
Q यौन सम्पर्क भनेको के हो ?
यौन सम्पर्क एउटा क्रियाकलाप हो जसको यौन कामवासना पुरा गर्न पाकक्रिडाबाट सुरुवात हुन्छ र यौन सम्बन्धको रुपमा अन्त्य हुन्छ । यौन सम्पर्क फरक लिङ्ग वा उही लिङ्गको पनि दुई व्यक्तिहरुको बिचमा गर्न सकिन्छ । यौन सम्पर्क राख्ने धेरै तरिकाहरु छन् जस्तै योनि, मलद्वार र मुखमैथुन । यौन सम्पर्कले दुई चरणहरु समावेश गर्न सक्दछ पहिले पाकक्रिडा र दोस्रो शारीरिक सम्बन्ध हो । पाकक्रिडामा चुम्बन गर्ने, अंगालो हाल्ने, छुने आदि हो । जबकी योनीमा गरिने शारीरिक सम्बन्धको मतलब पुरुषहरुको उत्तेजित लिङ्ग महिलाको योनिमा छिराउने हो ।
Q गर्भवती भएको समयमा सेक्स गर्दा मेरो बच्चालाई हानी गर्छ ?
यदि तपाईंको सामान्य गर्भावस्था छ भने, तपाईं सुरक्षित रूपमा तेस्रो देखि आठौं महिनाको बीचमा यौन सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ । तथापि, यदि तपाईं गर्भाधारणको शुरुवातमा दाग वा रगत बग्ने जस्ता कुनै जोखिम कारक वा जटिलताहरू छन् भने, पेट दुख्ने वा बटारिने, बिग्रिएको पानी, गर्भाशय कमजोरीको इतिहास, कमजोर- बस्ने ठाउँ (प्लेन्सेन्टा प्रेरिभिया), गर्भपात वा जुम्ल्याहा गर्भाधारणको इतिहास छ भने, यस्तो यौन सम्बन्ध नगर्नु राम्रो हुन्छ । तपाईंको गर्भावस्थामा (सामान्य वा जोखिममा राख्ने) के सुरक्षित छ भनेर मनमा राख्नको लागी सुझाब दिने सही व्यक्ति स्त्री रोग विशेषज्ञ हो ।
Q के मलाई मुखमैथुन वा चुम्बनबाट एच.पी.भी. लाग्न सक्छ ?
हो । मुखमैथुन र गहिरो चुम्बन सहितको यौन क्रियाकलापले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई एच.पी.भी. को प्रसारण हुन सक्छ ।
Q सबै एस.टी.डी.हरू एच.आई.भी.सँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
हुदैँनन् । गनोरिया, साईफिलिस आदि जस्ता यौन सम्बन्धहरुबाट लाग्ने धेरै अन्य रोगहरु छन्, जुन एच.आई.भी. सँग सम्बन्धित हुदैँनन् । तिनीहरु प्रत्येकको लागि फरक कारण हुन्छ; केवल संक्रमणको प्रकार भने यौनको प्रसारण हो ।